PIPA / SOPA: कसरी नि: शुल्क सामग्रीले हामीलाई मार्न सक्छ Martech Zone
PIPA / SOPA: कसरी नि: शुल्क सामग्रीले हामीलाई मार्न सक्छ
बुधवार, जनवरी,, २०१२ आइतवार, सेप्टेम्बर 30, 2012 Douglas Karr
धेरै कम्पनीहरूले प्रोटेक्ट आईपी (पीआईपीए) / सोपा कानूनको बिरूद्ध लड्न को लागी आफ्नो साइटहरू ब्ल्याक गर्दै छन् जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा समीक्षा भइरहेको छ। गाडीमा चढेर मेरो साइटलाई बन्द गर्नुको सट्टा, मैले सोध्यें कि तपाईंसँग मेरो प्रतिक्रिया साझा गर्न यो अधिक रचनात्मक हुनेछ।
हामीसँग २,2,500०० भन्दा बढी ब्लग पोष्टहरू छन् जुन प्रचार गर्नुहोस् टेक्नोलोजी जसले विश्वभर एजेन्सीहरू र बजारलाई मद्दत गर्दछ। हामीले हाम्रो कुनै पनि सामग्रीको लागि कुनै शुल्क लिएनौं, न हामी गर्‍यौं। जब हामी टाँसिएका हुन्छौं, हामी प्राय उत्पादन वा कहानी समीक्षा गर्न समय लिन्छौं - र हामी सूचनालाई कुनै शुल्क बिना नै पोष्ट गर्दछौं। हामीसँग कम्पनीहरूको अविश्वसनीय नोटहरू छन् जसले भनेका थिए कि हामी मात्र ब्लग हो जसले मात्र नोटिस लिएका थिए र यसले उनीहरूका उपकरणहरूको लागि महत्वपूर्ण एक्सपोजर र बृद्धि ल्यायो।
हामी प्रविधिको र सार्वजनिक सम्बन्ध उद्योगहरूमा धेरैको साथ पहिलो नामको आधारमा छौं किनभने हामी सहयोग गर्न उत्सुक छौं। जबकि अन्य ब्लगहरूले कम्पनी वा टेक्नोलोजी छुट्याउन मन पराउँछन्, तपाईं फेला पार्न सक्नुहुनेछ कि हाम्रो पोष्टहरू अत्याधिक सहयोगी छन्। हामी तपाईको सफल भएको चाहान्छौं। हामी तपाई समाधानको साथ सफल भएको चाहान्छौं। हामी ती समाधानहरू फेला पार्न चाहन्छौं।
अन्य कम्पनीहरूले प्रायोजनहरू मार्फत हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। जुमेरंग (अब सर्वेमेन्की) हाम्रो पहिलो आधिकारिक प्रायोजक थियो,aनि: शुल्क अनलाइन पोल सफ्टवेयर यसले हाम्रो लेखन र हाम्रा पाठकहरूको अन्तरक्रियाशीलतामा उल्लेखनीय बृद्धि गरेको छ। डिलिभ्रा एउटा हो ईमेल मार्केटिंग कम्पनी जसले ईमेल बजारका लागि सामग्री र अनुसन्धान प्रदान गर्दछ। दायाँ अन्तर्क्रियात्मक एक अग्रणी छ स्वचालन विपणन समाधान कसले हामीलाई बुझ्न मद्दत गरिरहेको छ ग्राहक जीवन भर मार्केटिंग.
हाम्रो प्रायोजकहरू र विज्ञापनदाताहरूसँग हामी एक होस्ट गर्न सक्षम भएका छौं मार्केटिंग पोडकास्ट, एक महान ईमेल न्यूजलेटर विकसित गर्दैछौं, हामीले भिडियो विकास गर्न सुरु गरेका छौं र हामी हाम्रो साइटको अनुभव बृद्धि गर्न जारी राख्छौं। हामीसँग पनि एक छ मोबाइल अनुप्रयोग सही कुनामा! वेबिनरहरू हाम्रो छोटो सूचीमा पनि छन्। ती सबै तपाईका लागि निःशुल्क छन् - हाम्रा पाठकहरू। जबकि हामी सिधा ब्लगबाट नाफा लिन सक्दैनौं, रकमहरू सहयोगको लागि लगानी गरिन्छ तपाईं। अवश्य पनि, हामी एक प्रीमियर ब्लग गरेर फाइदा ... तर आशा छ तपाईं पनि गर्नुहुन्छ।
यो परिवर्तन हुन सक्छ।
आज, हामीले इंडियानामा हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रा सरोकारहरू छलफल गर्न छलफल गरेका थियौं IP ऐक्ट र SOPA लाई सुरक्षित गर्नुहोस्। नेताहरू जवाफदेही थिए, तर उनीहरूले भनेनन कि हाम्रो प्रतिनिधिले बिललाई समर्थन गरिरहेका थिए। यहाँ केहि थप जानकारी छ - तर कृपया तल मेरा नोटहरू मेरो चिन्ताको साथ पढ्नुहोस्।
जहाँसम्म हाम्रा प्रतिनिधिहरू चिन्तित छन्, DNS रोक्ने कामलाई बढाइ दिईएको छ र तेस्रो पक्षलाई साईट रोक्ने कि नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्न आवश्यक छ। मौखिक दुबै दिशामा जान्छ कि केवल साइटहरू अवरुद्ध हुन सक्ने विदेशी साइटहरू हुन्। म वकील होईन, त्यसैले म सहि छैन कि त्यो सत्य हो कि होइन।
के तत्कालै हुन सक्छ, उचित प्रक्रिया बिना नै, त्यो भनेको प्रतिलिपि अधिकार उल्ल .्घनलाई समर्थन गर्ने ठानेको साइट खोजी इञ्जिनबाट हटाउन सकिन्छ र साथै विज्ञापन राजस्वको सबै साधनहरू अवरुद्ध गरिएको छ। यो कुनै सूचना बिना र एक साइटको रक्षाको क्षमता बिना नै हुन सक्छ। हाम्रो खोज इञ्जिनको भ्रमण र हाम्रो राजस्व लाइफ ब्लड हो जसले यस ब्लगको विस्तार जारी राख्न मद्दत गर्दछ। अर्को शब्दमा, यदि हामीले साझा गरेको सामग्रीको साथ युद्धमा जान चाहने कानुनी प्रेमीको भारी कर्पोरेसन भने ... हाम्रो ब्ल्गलाई कुनै गाह्रो अवस्थामा गलाले हानेर मार्न सकिन्छ।
मलाई फोनमा आश्वासन दिइयो कि यो एकदमै असम्भव छ, कि हामी प्रतिनिधित्व पाउन र यस मुद्दालाई लड्न सक्षम हुने छौं। यहाँ समस्या छ ... त्यो समय र पैसा लिन्छ जुन मसँग सानो व्यवसायको रूपमा छैन। त्यसोभए झगडा गर्नुको साटो, यो मेरो लागि उत्तम हो कि साइट फोल्ड गर्नुहोस् र पछाडि जानुहोस् र ठूलो कम्पनीमा काम गर्नुहोस्। त्यो डरलाग्दो छ।
वाशि Washington्टन एक वकिलहरूले भरिएको शहर हो। तिनीहरू प्राय: सम्झना गर्दैनन् कि कानूनी संसाधनहरू बिना हामी आफैंले पर्याप्त ढ defend्गले आफूलाई बचाउन सक्दैनौं। यो मेरो विचारमा प्रोटेक्ट आईपी र सोपा कार्यहरू गर्न लेखिएको छ। तिनीहरू एक मर्ने उद्योग को एक उपकरण हो ... अपरिहार्य रोक्न को लागी प्रयास गर्न को लागी एक अन्तिम हडबड। मैले प्रदान गरेको सादृश्य स्टोर स्टोरकी थियो जसले ढोकामा लक राख्न मानेन। किनकी तिनीहरू आफैंलाई कसरी जोगाउने भनेर बुझ्न सक्दैनन, उनीहरू अब सरकारलाई उनीहरूको सुरक्षाको लागि आग्रह गरिरहेका छन।
मैले यो ब्लगरको एकल दृष्टिकोणबाट मात्र लेखिरहेको छैन। हामी हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार सम्मान गरिएको अपेक्षाको साथ सामग्री प्रदान गर्दछौं। कहिलेकाँही यो भएको छैन र मैले कारबाही लिएको छु। म साइटहरू रोक्न सक्षम भयो, तिनीहरूलाई विज्ञापन प्रणालीमा रिपोर्ट गर्नुहोस्, र अन्य कम्पनीहरू छ - जस्तै शेयर फोटो कम्पनीहरू - गहिरा जेबको पछि उनीहरू जान्छन्। यसको मतलब सानो ओल डग उल्लंघन रोक्न र सरकारको आवश्यकता बिना यो लड्न सक्षम भएको छ। अवश्य पनि, यो मेरो बौद्धिक सम्पत्तीको बारेमा होइन - यो फिल्म र रेकर्ड उद्योग बिग्रेको नाफाको बारेमा छ।
यो दुखद हो। र यो दुर्भाग्यवस छ कि हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले वास्तवमै यो गर्ने बारे सोचेका थिए। अझ दु: खपूर्ण कुरा यो हो कि लोकतान्त्रिक नेता, क्रिस डड, अब यो फोर्सको नेता हो जसले इन्टरनेटको मुख्य मूल विशेषतालाई कुचोल्नेछ - जानकारी स्वतन्त्र रूपमा साझा गर्ने क्षमता। यो त्यस्तो बिल हो जुन गहिरो जेबसँगै उनीहरूलाई सशक्त पार्छ ... र शक्तिहीनबाट अवसर हटाउनेछ। यसले तपाईं सहित इन्टरनेटमा प्रत्येक प्रयोगकर्तालाई प्रभाव पार्दछ।
कृपया राम्रो विवरणहरू पढ्न र यसलाई कसरी तपाईं, तपाईंको सामग्री र तपाईंको व्यवसायमा असर पार्दछ भनेर बुझ्नको लागि समय लिनुहोस्। तपाईलाई अमेरिकन हुन आवश्यक पर्दैन, इन्टरनेटको सीमा हुँदैन हामी हावा दिन सक्छौ ... र संयुक्त राज्य अमेरिका बाहिरका मानिसहरु अधिक जोखिममा हामी भन्दा मा अधिक पढ्नुहोस् अमेरिकी सेन्सरशिप रोक्नुहोस्.
सामाजिक मिडियामा हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व
जनवरी 18, 2012 मा 2: 22 एएम
तपाईको टिप्पणी कि "झगडा गर्नु भन्दा मेरो लागी मेरो लागि यो राम्रो हुन्छ कि साइट फल्ड गर्नुहोस् र पछाडि जानुहोस् र ठूलो कम्पनीको लागि काम गर्नुहोस्। त्यो डरलाग्दो छ। ”
मेरो विचारमा तपाईंले त्यहाँ टाउकोमा कील हिर्काउनु भयो।
हुनसक्छ म एक सानो व्यवसाय मालिकको रूपमा पनि केही पक्षपाती छु, तर बोर्डमा राजनीतिज्ञहरूबाट देख्ने सबै कुराले हामीलाई ठूलो प्रणालीमा कगको रूपमा काम लिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ। अमेरिकीहरूलाई हाम्रो उद्यमशील जरामा फर्कनको लागि थोरै प्रोत्साहन छ र "अमेरिकी सपना" लाई केही प्रकारको "इन्टिटिमेन्ट" प्याकेजमा परिणत गरिएको छ। ठुलो व्यवसायले बेलआउट पाउँदछ जबकि साना व्यवसायले आज कल loanण लिन सक्दैन।
त्यो सबै भन्नको लागि, सोपा र PIPA कार्यहरू ठीक साथ अनुरूप लाग्छ। म पक्कै आशा गर्दछु कि दुबै पूर्णतया गोली हानिनेछ, तर वाशिंगटनका वकिलहरु लाई थाहा भएपछि हामी यस किसिमका कार्यहरू सुन्दा अन्तिम हुनेछैन।
भाई थिच्नुहोस्, र तपाईं के गरिरहनु भएको छ।
जनवरी 18, 2012 मा 11: 41 एएम
ब्रायनको टिप्पणीले हाम्रोमा के हुँदैछ भनेर संकेत गर्छ
पछिल्ला १ 150० बर्षमा धेरै देशहरुकालागि त्यो ठूलो प्रयास हो
तुलनात्मक जीवन नियन्त्रण गर्न सरकार जस्ता निकायहरू
असुरक्षित हाम्रो सरकारले सामाजिक कार्यक्रमहरू सिर्जना गरेको छ जुन अनिवार्य रूपमा छ
व्यक्तिगत जिम्मेवारी र भित्री प्रेरणा को कुनै पनि भावना दूर लिनुहोस्
व्यक्तिहरूबाट ती प्रणालीमा यत्तिको निर्भर छ कि डर
असुविधा वा चोटले उनीहरूलाई छोड्नबाट रोक्दछ (हाम्रो 79--हप्ता लामो)
बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम एक उत्तम उदाहरण हो)। हाम्रो सरकार छ
बिस्तारै तर पक्कै पनि उद्यमशीलता मिल्न को लागी एक कदम ले
व्यक्तिहरुकालागि पुरस्कृत पुरस्कारहरु टाढा लिईएको (करहरु मार्फत,
नियमहरू, समाजवाद, र अधिक) र यसलाई अस्वीकार गरेर यो हो
अमेरिकालाई विश्व बन्न अनुमति दियो भनेर मात्र केहि चीजहरू मध्ये एउटा
यसको स्थापनादेखि २० औं शताब्दीको शक्ति।
जनवरी १, २०१ 18 १२::2012 अपराह्न
राम्रो तर्क, राम्रोसँग बनेको छ। SOPA रोक्नु पर्छ।
रोक्नुहोस् "SOPA" सही छ। कसले, के र किन यो भइरहेको छ भन्नेमा अचम्म पार्दछ - सोप्पाको पछाडि को हो?
म तपाईंलाई बच्चाहरूलाई भन्नेछु ... यो सबै कुराको बारेमा छ "नियन्त्रण"